I-anti-racist activism e-US ibuyele ekuqaleni kwee-1800 xa ababhubhisi be-abolitionist baqala ukuhlanganiselwa ukukhululwa kwamakhoboka. Ngoko, umkhankaso we-abolitionist? Babhala, bathetha kwaye baxhamla, bathiwa ngamacandelo ambalwa.
Kunzima ukukholelwa, kodwa ezininzi iindlela zokubhubhisa abasebenzisa ukulwa nokucwasana kwabantu zisasebenza ezimbini kwiinkulungwane kamva. Unomdla wokujoyina abantu baseMelika abaziwayo abaye balwa nokungalingani kohlanga?
Qalisa ngokukhetha kwiindlela ezininzi.
Amandla ePeni lakho
Ukubhala kubhalwe kwangaphambili njengenye yezinto eziphambili zokulwa nokulwa nobuhlanga. Abantu abayi ku-rally ngenxa yezizathu abazi nto. Ngoko ke, ukuba ufuna ukuba ngumdlali olwachasayo ngokobuhlanga, fumana igama malunga nobuhlanga.
Yithi ishishini kuluntu lwakho lugqithisa abathandi bombala obomvu okanye abenqwenela ukuyikhonza. Ingaba wenza ntoni? Bhala iileta kubahleli bamaphephandaba asekuhlaleni. Akunako kuphela ukuyipapasha, banokukuvumela ukuba ubhale ikholomu yeendwendwe kwimiba. Kodwa musa ukuma apho. Bhala kubomthetho kwindawo yakho-kwibhunga leedolophu, i-dolophu, iindibano zabantu.
Ukongezelela, i-Intanethi ikuvumela ukuba wonke umntu ehlabathini azi ububi bokungabi nabulungisa. Bhala iblogi okanye usethe iwebhusayithi kwi-bigotry odibana nayo kwaye kungekudala, uya kuba kude kuphela ochaphazelekayo malunga neengxaki.
Musa ukulwa yedwa: Joyina iqela elichasayo
UMartin Luther King Jr. akazange asebenze yedwa ukuze afumane amalungelo omntu kubo bonke abantu baseMerika, kwaye akufanele na. Inani eliqela lamaqela achasene nama-racist liye lalwela ukulwa nokungalingani. Zibandakanya iNtshukumo yoLwaphulo-mthetho, uMbutho weSizwe woPhuculo lwaBantu abaBala, i-American Civil Liberties Union kunye neSouth Poverty Law Centre.
Fumana isahluko samaqela afutshane nawe kwaye ubandakanyeke. Basenokufuna ukuba uqokelele imali, ufumane kwaye uholele iiworkshops, phakathi kwezinye izinto. Nangona ugqiba ukwenza into efana neyomntu njengokwenza ikhofi yabasebenzi, ukusebenzisana kunye neqela elichasene nelokuhlaselwa libala liza kukunika umbono wokungabikho kocalulo, bathethe uluntu malunga ne-bigotry kunye nabantu baseburhulumenteni ngesizathu.
Xa isenzo esibukrakra sokubandlulula ubuhlanga siba nolwazi loluntu, unokubheka ukuba umboniso uza kulandela ngokukhawuleza. Ngexesha elizayo iqela elichasene nelobuhlanga liququzelela umbhikisho, unganqikazi ukujoyina. Hambisa amapheshana kubantu abadlulileyo. Fumana udliwano-ndlebe kwiindaba ezihlwaya.
Ukubandakanyeka kokungathobeli komntu kuyindlela enhle yokufundisa uluntu malunga nokucalulwa kuluntu. Njenge-activist ye-anti-racist activist, isixhobo esixhasayo sokunxibelelana. Nangona ukhonkco, uqiniseke ukuba udibana nabantu abafana nabo onokusebenzisana nabo kwixesha elizayo ukulwa nobuhlanga.
Yazi Amazwi Akho
Kuthiwani ukuba i-activism yakho iyakwenza umhlaba kwiindaba ezihlwa? Ngaba unokuthetha ngokukholisayo malunga nantoni na ukulwa nokucwasa ubuhlanga kwaye kutheni abantu ekhaya kufuneka bakujoyine? Qinisekisa ukuba ulungele ukuphendula imibuzo malunga nesizathu sakho ngokuphanda ngokucokisekileyo.
Akukho nto ihlazo ngakumbi kunokuba ibone iqela lomlweli likhule ulwimi-luboshwe xa kucelwa ukuba lucacise ingxaki.
Yithi amapolisa adubule umntu omnyama ongenamdla kwindawo yakho. Njengomqhubi, kunomsebenzi wakho ukufumanisa ukuba zeziphi izizathu, ukuba zikhona, amagosa anikezele ukudubula kunye nokuba ngaba amagosa ahlawulwa okanye anembali yokusebenzisa amandla angaphezulu. Kwakhona kunomdla wakho ukwazi ukuba ngaba ixhoba labangela ukudubula nangayiphi na indlela okanye inemvelaphi yobugebengu. Ukuqokelela ezi ntlobo zeengqiniso akuyikukwenza kuphela umthombo othembekileyo kumabonakude kodwa kukukunceda uvuselele uluntu ukuba uhlanganyele kulo mlo.
Ngoxa kubalulekile ukuba ukwazi ukuxhamla kunye nokuphuma kweziganeko ezithile, ngoko ke ukwazi ukuxubusha ubuhlanga ngokubanzi. Funda amanani abalulekileyo, imicimbi, kunye nemini ekuloleni ubulungisa bobuhlanga.
Funda iincwadi malunga nobuhlanga, ngokukodwa abo babhaliweyo ngabasebenzi. Qala nge- Mirror eyahlukeneyo kaRonald Takaki okanye i-Howard Zinn yomlando wabantu base-United States . Thatha iifilimu, ubugcisa, kunye nemidlalo yokubandakanya ubuhlanga. Njengoko ilizwi lisithi, "ulwazi lunamandla."
Cinga ngomsebenzi wokuTshintsha
Ngaba ufuna ukwenza umsebenzi wokulwa nobuhlanga? Kungenziwa. Mhlawumbi ngoku ixesha lokugqibela ekusebenziseni kwisikolo somthetho kwaye ube ngummeli wamalungelo oluntu. Unokucinga kwakhona ukusebenzela iKomishoni ye-Equal Employment Commission ukuba uncede ukulwa nokucwaswa kwindawo yokusebenzela . Ngubani owaziyo? Ukuzithandela kwinqanaba elichasene nohlanga lingakhokelela ekusebenzeni ixesha elizeleyo.
Ukuba ufuna ukuba ngumdlali ochasayo ngokobuhlanga, thuzela induduzo kwinto yokuba unemibutho yemibutho, uncwadi kunye namaqela ezopolitiko ukuze ufikelele ekufuneni kwakho. Nangona kubalulekile ukubandakanyeka kwimisebenzi enjengemirhumo okanye iikhankathi zokubhala ebhalweni ukulwa nokucwasa ubundlobongela, kubalulekile ukuthetha ngokuchasene nobandlululo kwimpilo yemihla ngemihla. Ngoko, ixesha elizayo umhlobo osebenza naye uxelela uhlazo lobuhlanga okanye ilungu lentsapho likhalaza ngeqela elithile lenkcubeko, yenza inxalenye yakho kwaye uthethe. Kunzima ukulwa nobuhlanga ngokubanzi xa ungeke ukwazi ukumelana nayo kwindawo yangasese.
Iingqungquthela ezi-4 eziphezulu malunga nomtshato omnyama
Ngaba i-GOP inenkinga ngeeNcinci?
Sebenzisa ii-Pop Rocks ukwenza i-Volcano (Akukho i-Baking Soda okanye iVinegar)
Iholide zehlabathi elixela iSpanishi
Iingoma eziphezulu zee-Air Supply of '80s
IBakala leBili yeenjongo zabafundi emva koNyaka omtsha